यस्तो बन्नेछ - अब ई-पासपोर्ट ! | जनदिशा
यस्तो बन्नेछ – अब ई-पासपोर्ट !
काठमाडाैं। सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट एमआरपी लाई स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट ई —पासपोर्ट मा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदा गरेको छ ।
Previous Previous post: पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा ढलान गरिएको केही दिनमै पुल भत्किएपछि…
Next Next post: सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई, स्थानीयकाे विरोध